प्रधानसेनापति खुला म्याराथन :सेनाका बस्नेत प्रथम
Saturday, 10 Feb, 2018 4:00 PM
काठमाडौँ, २७ माघ - प्रधानसेनापति खुला म्याराथन प्रतियोगितामा नेपाली सेनाको शेरगणका हवल्दार कृष्ण बस्नेत प्रथम हुनुभएको छ । बस्नेतले दुई घण्टा २२.५२ सेकेन्डमा निर्धारित ४२.१९५ किमी दुरी पूरा गरी पहिलो हुनुभएको हो ।
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सैनिकमञ्च टुँडिखेलमा आज आयोजित समापन समारोहमा बस्नेतलाई पल्सर मोटरसाइकल, रु. एक लाख नगद, शिल्ड र प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो ।
उक्त प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरी बलका गोपीचन्द्र पार्की द्वितीय तथा नेपाली सेनाको रणसिंह गणका अमल्दार राजन खत्री तृतीय हुनुभयो । पार्कीले उक्त दुरी दुई घण्टा २५ मिनेट २७ सेकेण्ड तथा खत्रीले दुई घण्टा २९ मिनेट १२ सेकेण्डमा पुरा गर्नुभयो । उहाँहरुलाई क्रमशः रु. ५० र रु. २५ हजार नगद र प्रमाणपत्र प्रदान गरियो ।
उक्त दौड टँुडिखेलबाट शुरु भई भद्रकाली, शहीदगेट, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, तीनकुने, कोटेश्वर, जगाती, कमलविनायक, ब्यासी, सानोथिमी, पेप्सीकोला, जडीबुटी, एयरपोर्ट, गौशाला, चाबहिल, महाराजगञ्ज, लाजिम्पाट, जयनेपाल चित्र घर, राजदरबार हँुदै टँुडिखेलमा पुगेर समापन भएको थियो ।
हाफ म्याराथनमा विश्वरुपा प्रथम
प्रधानसेनापति महिला खुला हाफ म्याराथन प्रतियोगितामा नेपाली सेनाको जगदल गणका प्यूठ विश्वरुपा बुढाले निर्धारित २१ किलोमिटर दूरी एक घण्टा १९ मिनेटमा पूरा गरी स्कुटर, नगद रु एक लाख, शिल्ड र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभयो ।
उक्त प्रतियोगितामा नेपाली सेनाकै राजदल गणका प्यूठ रेशु बस्नेत र सशस्त्र प्रहरी बलका बिन्द्रा धनके श्रेष्ठले क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो । पुरुषतर्फको हाफ म्याराथनमा नेपाली सेनाको शेर गणका गजेन्द्रराज राईले एक घण्टा १० मिनेटमा निर्धारित २१ किमी दूरी पार गरी प्रथम स्थान हासिल गर्नुभयो । समापन समारोहमा उहाँलाई रु ५० हजार नगद, शिल्ड र प्रमाण प्रदान गरियो ।
उक्त प्रतियोगितामा नेपाली सेनाको रणसिंह दलका सिपाही रामजी बस्नेत र सिंहनाथ गणका हँुदा कल्याण बानियाँ क्रमश ः दोस्रो र तेस्रो घोषित भई नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ ।
सो अवसरमा १० किमी र पाँच किमीको महिला तथा पुरुष दौड प्रतियोगिता पनि आयोजना गरिएको थियो । ती दुवैै प्रतियोगितामा विदेशी धावक समेत सहभागी हुनुभएको थियो ।
नेपाली सेनाले आजै पाँच किमी दूरीको वाकाथनसमेत आयोजना गरेको थियो । सैनिक मञ्चबाट शुरु भएका ती विभिन्न प्रतियोगिता सोही स्थानमा आएर समापन भएको थियो । यसअघि आजै बिहान प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले तोप पड्काएर उक्त प्रतियोगिताको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । नेपाली सेनाले हरेक वर्ष महाशिवरात्री एवं सैनिक दिवसको अवसर पारेर यस्ता खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै आएको छ ।